HomeHoryaalka ItalyKooxda Napoli oo ka fikireysa sidii ay ku xalin laheyd goolhayaheeda Alex Meret.
April 17, 2021 Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Napoli ayaa lagu soo waramayaa inay sameyn doonto wax walba oo ay kari karaan si ay goolhaye Alex Meret u sii hayaan, iyadoo ay jiraan warar xan ah oo ka imanaya Inter iyo Roma.
Goolhayaha reer Talyaani ayaa la tartamay David Ospina intii uu macalin u ahaa Gennaro Gattuso waqtigiisii Partenopei iyo damaanad qaadkii ka jiray Naples ayaa ku dhamaaday wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan macsalaameynta xagaagan.
Azzurri ayaa la soo saxiixday goolhayaha seddex sano ka hor lacag dhan 25 milyan euro laakiin waxaa soo baxay warar xan ah oo ka imanaya kooxaha ay xafiiltamaan ee Inter iyo Roma.
La Repubblica ayaa maanta sheeganeysa in Napoli ay sameyn doonto wax walba si ay uga fogaato iibinta Meret, oo 14 jeer ka ciyaaray Serie A xilli ciyaareedkan.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Napoli ay mustaqbalkiisa meel la mari doono 24-sano jirkaan goolhayaha ah iyadoo ciyaaryahankii hore ee Empoli, oo uu hal mar u saftay Italy, ayaa horey u ciyaaray 70 kulan oo tartan ah kooxda Partenopei.